Sababiin seenaa gudeedamu kiyyaa waggoota 67 booda dubbadheef - BBC News Afaan Oromoo
16 Onkololeessa 2019
Elisaabet Ohene, gaazexeessituu beekamtu, kan BBC irratti barreessituufi duraan Gaanaatti ministeera kan turte dhiheenya kana wayita ganna torba turte mudannoon gudeedamu akka ishee mudate ture waggaa 60n booda ifa taasiifte.
Isheenis sababii maaliif akka waggoota kanneen hundaaf iccitii qabattee turte ibsite jirti.
Miidhaa dirqiin gudeedamu kiyya ifa yoo taasisee maal natti fiduu akka danda'u baay'ee itti hinyaadne ture.
Guyyaa Roobii darbe ture gaazexaa biyya Gaanaa keessatti bal'inaan tamsa'uufi anis torbaniin irratti barreessu 'Daily Graphics' tti seenaa kiyya kanan hime yeroo jalqabaatiif.
'Warri nama gudeedan kolaafamuu qabu'
Ani amman dubartii umuriin waggaa 74'ti. Seenaa kanas waggaa 67 boodatti deebi'uun yaadataati.
Hiriyyaan dhiiraa dhihoo kiyya tokkoos maaliif akkan seenaa kiyyaan ba'aa akkan itti uumee na gaafate. Akka natti himanittis seenaan kiyya dubbisuuf ulfaataa ture. Waggoota 67'f ofii kiyyaaf dhoksee kaa'een ture. Amma maafan himu barbaade? Maafan waliin hin awwaalamiin?
Jalqaba maaliif akkan seenaa kiyya qoodu barbaadeen dubbadha.
Ba'aa seenaa kiyyaa hawaasa shakke hinbeekne irratti fe'uudhaaf hinbarbaadu. Wantan seenaa kiyya kanas himuudhaaf waggoota dheeraa duraa qabee dirqama natti ta'eef, shamarran eessattu argaman kanneen miidhaan ani keessa darbe irraa akka eegaman abdachuun yaadeeni.
Jalqaba seenaa kiyya himuun qaba isaan booda maaliif akkan himee dubbachuun yaala.
Barrisaa 1952 ture. Umriin waggaa torba yoo ta'u, baayyee gammachuu qaban ture. Akkayyoo kiyya waliinan jiraadha ture. Guyyaa tokkos namni maatii keenya waliin walitti dhufeenya gaarii qabuufi ollaa keenya ture tokko harkisuun manasaa na galchuun miidhaa narraan gahe.
Maal akka narraan gahe dubbachuuf jecha hinqabu. Yeroo sanattis namtichi maal akka narratti raawwate hinbarre ture. Maqaasaas himu hindanda'un ture.
Masiriitti abbaan seeraa dubartii gudeeduu kakaasuun yakkamaa ta'e
Wantiin beeku yoo jiraate, harkasaa saakkarraa'aafi qeensa isaa qofaan yaadadha ture. Qubasaatiin miidhaa narra qaqqabsiisuu nan yaadadha.
Ulfinni qaamasaa, ajaan qaamasaa, qubisaa saakarraa'aan sun waggoota 67 guutuu akka waan kaleessa umameetti haala sammuu kiyya dhukkubsuun natti dhagahama. Nan yaadadhas.
Wanti na jibisiisu tokko yoo jiraate, duudhaan haawaasaa miidhaa narra gahe akkan bal'naan dubbadhuuf naaf hinhayyamu. Duuchaadhumatti miidhaan gudeeddii narra gaheera qofa akka jedhu barbaadama.
Akkayyoon kiyya waan dandeesseen na kunuunsiteetti gama qaamaatiin. Maal akka umamee itti hinhimne. Boromtaa miidhaan narra gahee wayita dhaqna na dhiqaa turteetti, qaama saalaa kiyyaa wayita dhangala'aan yaa'u agarte. Innis infekshinii umee ture.
Isheenis maal akka umamee osoo na hingaafatiin kunuunsa naaf taasisaa turte. Isheenis mucaa jaallatturratti waan akkasi ni raawwatama jettee yaaddee hinbeektu ture.
Jireenya ganamaan dukkanaa'e
Dhimmi biraa ijoollummaa kiyya dukkaneesse kan narratti raawwate ammoo wayita waggaa 11 tureetti. Namtichumtu sun ammas na gudeede.
Gochi sunis madaa gonkumaa jireenya koo keessatti hinfayyine narra buusee darbeera. Lubbuun turuun kiyya gaariidha, miidhaan narra gahe guutummaan na balleesse jechu hindanda'u.
Jireenya gaariis jiraadheera. Gaazexeessituu, barreessituufi gama aangootiinis sadarkaa ministira motummaa qaqqabeera. Amma yoon du'ees ilaalcha hawaasa Gaanaatiin awwaalcha kiyyarratti akkan gumaata olaanaa taasiseetti naaf barraa'a.
Kanaafiidha namoonni baay'een amma maaliif oduu jibbisiisaa akkasii himte kan naan jedhaniifi.
Dhimmin dubbachu danda'u tokko gudeedamuun daa'immanii hanga ta'een hawaasa keessatti fudhatamaa ta'usaa muxannoon kiyya natti mul'iseera.
Pirezedantiin duraanii Gaambiyaa 'Jaameen na gudeedeera'
Keessattuu ijoolleen shamarranii xixiqqoon balaa warra dhiirootaa gurguddoo jala jiraatu. Akka hawaasaattis dhimma kanarratti mari'achuuf hayyamoo miti.
Ammaan tana hanga ta'e fooyya'inni jiraatulleen, mucaa dubaraa tokko gudeedamte namni gabaasa taasisee tokko hawaasichaan dhiibbaa olaanaatu irra gaha.
Gama poolisiitiinis himmannicha dhiisuun mana keessatti waliigalteerra akka gahamuuf irra deddeebiin dhiibbaan irra gaha.
Kanneen mana gudeedee sana mana murtii geessanis isaan maatii waliin adda citu barbaadaniidha. Kanaafi, dhimmoonni gudeeddii mana murtii dhaqan kan baayyee xiqqaa ta'an.
Dhalattuuwwan waggaa sadii osoo hinhafne rakkinan ani keessa darbe keessa darban jiru.
Warra daa'imman gudeedan caalaa warra saalaa walfakkaatuuf fedhii qaban jibbuu
Yoo miidhaa irratti waliin haasa'u hindandeenye, haalicha geeddaruun hindanda'amu. Akka hawaasaatti waa'ee quunnamtii saalaa dubbachuuf hayyamoo miti.
Yoo namoota saalaa walfakkaatan jaalatan ilaalchisuun aarii keenya ibsuuf ta'een alatti gama biraatiin waa'ee quunnamtii saalaa hindubbannu.
Jaalalli namoota saalaan walfakkaatan jidduu biyya Gaanaatti haala olaanaa ta'een fudhatama hinqabu. Qorannoon tokko akka mullisuutti hawaasni %97 ta'u, namoonni saala walfakkaatu jaalatan Gaanaa keessa ni jiru jedhanii hin amanan.
Kanaaf manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa Gaanaa keessatti barnoonni quunnamtii saalaan wal qabatan haa kennamu jennaan kan aadaa hinfudhatamen, fayyaa amantaa, farra gaanaa fi daba ilaalcha warra saala walfakkaatu jaalatanii hawaasa keessatti babal'isuuf jechuun kan amanan baayyeen.
Mata dureen kunis sirna barnootaa keessatti akka hammatamuuf jennaan okkora waan kaaseef pirezidantiin biyyatti hanga ibsa kennaniitti gahe.
Namoonni baay'een gudeeddii dubartootaa akka waan barameetti ilaaluunsaanii rakkinicha furuuf hindanda'amne.
Nama tokkoolleen gargaaru yoon danda'e nan gammada
Namoota seenaa kiyya dhagahan keessaa baay'eensaanii deebiin naaf kennan kanan eegeen ol. Seenaa namatti hintolleedha. Haa ta'u garuu nagaa isaan dhorku isaatti na hindinqu.
Jaalalleewwan 'haaloo wal bahuuf viidiyoo walii saaxilan'
Baayyeen ammoo akka gootaatti na ilaalaniiru. Anaaf garuu seenaa kana dubbachuuf waggoota 67 na fudhateera. Anis isan beeka malee waa'ee gootummaa kiyyaa hinbeku.
Tokko tokko ammoo seenaa kiyya akkas ifatti dubbachuu kiyyaan akka waan tuffatamaafi gadi bu'eetti fudhatanis jiru. Isaaniif ani yaada homaa hinqabu.
Dubartoonni baayyeen ammoo na galateeffachuun attamiin ija jabina akka kenneefi kanneen seenaa isaanii waliin walitti fidanis jiru. Kuni natti dhagahameera.
Seenaan kiyyaas akka waa'ee quunnamtii saalaa ifatti dubbannu erga nutaatisuun daa'imman miidhaan irra gahe kan cimina isaaniif kennu ta'eetti, anis gammachuunan gara awwaala koo imala.
Abbootiin qabeenyaa marsariitii viidiyoo 'haaloo bahuf gadhiifamaniin buufatu’
''Warri nama gudeedan kolaafamuu qabu'' mootii Zuuluu
26 Fuulbana 2019
Giiftiin bareedinaa 'Pirezidantiin duraanii Gaambiyaa Jaameen na gudeede' jetti Jaaloow
Viidiyoo BBC Africa Eye: Barattoota shamarranii qabxii argachuuf saal quunnamtiif gaafataman
'Kaayyoo labsameef alatti waan biraaf akka hin oolle yaaddoo qabna' - Mararaa Guddinaa
Koronaavaayirasiin gadda ibsannaafi sirna awwaaalcha duraan barame jijjiiraa jira
Doktorri haadha koronaavaayirasiin qabamte deessiste maal himti?
'Maqaashee barreessuu qofa barattee haa dhiistu jedhanii barnoota na galchan'
Koronaavaayirasiin namoonni biiliyoona walakkaa akka hiyyooman taasisuu danda’a
Namni manatti gallaan hantuutni daandiitti yaate
Namichi 'sagalee ol-kaastanii odeessitan' jechuun namoota shan ajjeese
Humnoonni Sa'udiin durfaman Yaman keessatti lola dhaabuu labsan
Dr Teediroos Adihaanom haleellaan sanyummaa narratti raawwate jedhan